Subject: နှလုံးသားရဲ့ ကဗျာ 21st August 2011, 1:49 pm
ကောင်လေးတစ်ယောက်မှာ အချစ်ကဗျာတစ်ပုဒ် ရှိပါတယ်။ ကောင်လေးကိုယ်တိုင် ရေးသားထားတာလေးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကောင်လေးစိတ်ထဲမှာ မပြည့်စုံသေးဘူး ထင်နေတယ်။ ကဗျာကိုဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့…..။ အဲဒါနဲ့ ကဗျာလေးကို မွမ်းမံဖို့ ဘောပင်လေးကိုင်ရေးတော့မဲ့ အချိန်မှာ ကဗျာလေးက ကောင်လေးကိုပြောလိုက်တယ်။
ခဏနေဦး ကောင်လေး……မင်း ဘယ်လောက်ပြင်ပြင် ငါဟာ ရသမြောတ်လွန်းအောင် ကောင်းမွန်မှာမဟုက်ဘူး…..တဲ့
ကောင်လေးက ပြန်မေးးလိုက်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲလို့……………။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မင်းနှလုံးသား မှာ အချစ်မရှိဘူး၊ အချစ်ကို ခံစားတတ်တဲ့ စိတ် ပျောက်နေတယ်…………
ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ……ကျွန်တော်ရေးတဲ့ကဗျာတွေကို ရသအမြောက်ဆုံးဖြစ်စေချင်တာ….အကြံဥာဏ်လေး ပေးပါဦး…………လို့ ကောင်လေးကမေးလိုက်တဲ့အခါ
မင်းနှလုံးသားကို အချစ်ကိုရှာခိုင်းကွာ။ အချစ်ကိုမတွေ့ရင်လည်း အချစ်နဲ့ တွေ့ဖြစ်တဲ့ နှလုံးသားတွေကိုမေးကြည့်လိုက်။ ဒါဆို အနည်းနဲ့အများတော့ မင်းနှလုံးသားမှာ အချစ်ဆိုတာလေး ကိန်းဝပ်လာမှာပဲ။
ကဗျာလေးရဲ့ဖြေသံအဆုံး ကောင်လေးက နှလုံးသားကို ထုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အချစ်ကိုရှာခိုင်းလိုက်တယ်။ အကယ်ရွေ့ မတွေ့ဖြစ်ပါဘူးးဆိုတောင်မှ အချစ်နဲ့တွေ့တဲ့ နှလုံးသားတွေဆီက အကြံဥာဏ်တောင်းခဲ့……လို့ ခိုင်းလိုက်ပါရော………။
ပြီးတော့ ကဗျာလေကို မေးလိုက်သေးတယ်။
သေချာပါတယ်နော်………ကျွန်တော့ ကဗျာတွေ ရသမြောက်လာမှာ
အချစ်ဆိုတာကိုသာ သူတွေ့အောင်ရှာလာနိုင်ရင်တော့ သေချာတယ်ကွာ
ကောင်လေးလည်း ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပြီး နှလုံးသားလေးပြန်လာမဲ့ အချိန်ကိုစောင့်နေပါတယ်။ တော်တော်လေးတော့ ကြာမယ်လို့လည်း တွေးထာါးပတယ်။ ဒါပေမဲ့…………ကောင်းလေးရဲ့အထင်မှားသွားပြီး မထင်မှတ်တဲ့ ပုံစံနဲ့ နှလုံးသားလေးဟာ ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်လို့ ကြောက်ရွံနေတဲ့ပုံစံနဲ့…………….
နှလုံးသားလေး မင်း တွေ့ခဲ့လား အချစ်ကို
မတွေ့ခဲ့ပါဘူး ကောင်လေးရယ် ဒါပေမဲ့ အချစ်နဲ့တွေ့ဖူးတဲ့ ငါ့သူငယ်ချင်းသုံးယောက်နဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်
ဟုက်လား ဒါဆို အချစ်ဟာ ဘာလဲဆိုတာ မင်းနားလည်ခဲ့တယ်ပေါ့
ဟင့်အင်း နားမလည်ခဲ့ဘူး အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာတော့သိခဲ့တယ်………………..
ကောင်လေး အနည်းငယ်တွေဝေသွားတယ်။ ဘာ့ကြောင့်များပါလိမ့်ပေါ့။
ဘာဖြစ်လို့လဲ……..လို့ကောင်လေးကမေးတော့ နှလုံးသားလေးက ပြန်ဖြေပါတယ်။
ကျွန်တော်ဗျာ ပထမသူငယ်ချင်းနဲ့ လမ်းမှာတွေ့တော့ မေးလိုက်တယ်။ အချစ်ဆိုတာဘာလဲ သိလား…..လို့။ သူက ပြန်ဖြေတယ်။ သိတယ်…တဲ့။ ဘယ်လိုလဲ ရှင်းပြပေးပါလို့ မေးတဲ့အခါ………….ကြောက်ရွံစက်ဆုပ်နေတဲ့ မျက်လုံးနဲ့
အချစ်ဆိုတာ နှလုံးသားဆိုတဲ့ ငါတို့ကို ဖျက်ဆီးဖို့အတွက် သတ်သတ်ဖြစ်တည်လာတာကွ။ ခံစားချက်တွေ တနင့်ကြီးပေးတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီလို ငါတို့ ခံစားနေရတာ ကို သူပျော်နေတတ်တယ်။ အချစ်ဆိုတာနဲ့တွေ့ဖြစ်ရင် ငါတို့မှာ အကောင်းအတိုင်း ကျန်ရစ်တာ ရှားတယ်ကွ။ ဒီမှာကြည့်ပါ့လား။ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေချည်းပဲ။ အဲဒါသူလုပ်တာပေါ့……………………လို့ပြောရင်းထွက်သွားတဲ့သူ့ဆီက ဒဏ်ရာတွေကို ကျွန်တော် မြင်လိုက်တယ်။ ခုထိ သွေးတွေထွက်နေတုန်း။ ကြောက်စရာကြီးပါဗျာ။
ဒါနဲ့ မသေချာသေးပါဘူး။ ထပ်ရှာဦးမှဆိုပြီး ကျွန်တော် ခရီးဆက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းဆုံလမ်းခွလည်းရောက် ဒုတိယသူငယ်ချင်းနဲ့ တွေ့တယ်လေ။ ကျွန်တော်လည်း အချစ်အကြောင်းမေးတာပေါ့။ သူကကျတော့ ရီဝေညွတ်နူးနေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ဟိုးအဝေးက တစ်စုံတစ်ခုကို မှန်းမျှော်နေသလိုလိုပုံမျိုးနဲ့
အချစ်ဆိုတာ အရမ်းနူးညံ့တယ်။ သူက တန်ဖိုးထားချစ်တတ်သူတွေအတွက် နာကျင်ခြင်းကိုပေးတယ်။ နာကျင်ခြင်းဆယ်ခါခံစားပြီးရင် ပျော်ရွှင်ခြင်းတစ်ခါပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ နာကျင်သည်ဖြစ်စေ၊ ပျော်ရွှင်သည်ဖြစ်စေ အဲသည့်အချစ်ကိုခံစားနေရတဲ့ အခိုတ်အတန့်မှာ ကြည်နူးနေရတာတော့အမှန်ပါပဲ။……..တဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်းမေးမိလိုက်တယ်လေ။ ခု ခင်ဗျား နာကျင်နေသလား၊ ပျောရွှင်နေသလားဆိုတော့
ငါ ကြည်နူးရင်းနဲ့ နာကျင်နေတာပေါ့ကွာ……………..လို့ပြောရင်း သူတစ်စုံတစ်ရာကိုဆက်မျှော်နေပြန်တယ်။
ကျွန်တော်လည်းဆက်ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အချစ်ကို ကိုယ်တိုင်တွေ့လိုတွေ့ငြားပေါ့လေ။ မွေ့ခဲ့ပါဘူး။ သူက ကောင်လေး စိတ်ဝင်တစားမှ ရှိရဲ့လားလို့ တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကောင်လေးက စိတ်ဝင်တစားမျက်လုံးတွေနဲ့ သူ့ကိုကြည့်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်း တစ်ချက်ဆတ်ပြတယ်။ ဆက်ပြော…ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။
သူတစ်ချက်ချောင်းဟန့်လိုက်တယ်။ လည်ချောင်းရှင်းတဲ့ သဘောနဲ့ ပြီးတော့ သူ့ခရီးစဉ်ကို ဆက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ချောင်းလေးတစ်ခုတွေ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီချောင်းဘေးပါ သွေးသံရဲရဲနဲ့နှလုံးသားတစ်ခု ငိုနေတယ်လေ။ ကျွန်တော် သူ့နားသွားကြည့်လိုက်မိတာ မသေမချင်းအသေသတ်ဖို့များရည်ရွယ်ထားသလား မသိဘူးဗျာ။ ဒဏ်ရာတွေမှ အများကြီးပဲ။ အသေအချာကြည့်ကြည့်တော့မှ နှလုံးသားလေးကလည်း ထက်ပိုင်းပြက်လုလု။
ကျွန်တော်လည်း ချောင်းလေးဘေးမှာတစ်ချက်ထိုင်ရင်း ချောင်းရေနဲ့ မျက်နှာသစ်မိပါတယ်။ မောလှပြီလေ။ လျှောက်ခဲ့ရတဲ့ ခရီးက နည်းတာမှမဟုက်တာ။ ချောင်းရေက နည်းနည်းတော့ ငံကျိကျိ နိုင်သားဗျ။
သူက ကျွန်တော့ကို မေးတယ်။ ဘယ်လိုအရသာရှိလဲ… တဲ့။ ကျွန်တော်က နည်းနည်းတော့ ငံသလိုပဲဗျ………..လို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါ သူပြောတာက
ဗျာ…………………….လို့ ကျွန်တော်လည်း အတော် အံ့အားသင့်သွားတယ်။ မျက်ရည်ဟာ ချောင်းတစ်ခုဖြစ်တည်သည်အထိ ကျနိုင်ပါ့မလားလို့ …………….။
ဟုက်တယ်….အဲဒါ ငါ့မျက်ရည်တွေ။ အချစ်ဆိုတာနဲ့ တွေ့ခဲ့လို့ ငါလည်းဒီပုံစံဖြစ်သွားတာပဲ။
ကျွန်တော်တောင်မေးစရာမလိုဘူး။ သူက ကျွန်တော့ကို ရင်ဖွင့်ပြနေတယ်။ အဲဒါနဲ့………………ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ……..လို့ မေးလိုက်တော့
ငါကွာ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လက အချစ်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်……………
သူ့ကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ သူ့စိတ်ကြိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေချင်တာကွာ……ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့မရတာနဲ့ မေးလိုက်ကော မင်းကို့ယ့်ဆီက ဘာလိုချင်လဲလို့……………သူကပြန်ပြောတယ်ကွ……………..ရှင့်အသွေးအသားကို ခပ်ဖွဖွလေး ဓါးနဲ့ ထိကြည့်ချင်တယ်……..တဲ့
ဒါနဲ့ ငါလည်းထိဆိုပြီး ခွင့်ပေးလိုက်တာ သူငါ့အနားက ထွက်သွားချိန်မှ သိရတယ်………ငါ့အသွေးအသားတစ်ချို့ကို သူပွဲတော်တည်ဖို့ ယူသွားမှန်း……………..သူမရှိတော့မှ အဲဒီဒဏ်ရာတွေက နာကျင်တာတွေ ခံစားရတယ်။။။။သူမရှိတော့ သူ့ကို သတိရလွမ်းလွန်းလို့ ငိုလာလိုက်တာ သူက သတိရမရတော့မသိဘူး ငါ့မှာတောင့် ချောင်းတောင်ဖြစ်သွားပြီ။။။
အင်း…ခင်ဗျားအသွေးအသားကို ယူသွားတာဗျာ………..ဘာလုပ်ဖို့ သတိရနေဦးမှာလဲ မေ့ပြစ်လိုက်
ခင်ဗျား ဒဏ်ရာတွေ ကျတ်အောင်လို့ အရင်ကုစားလေဗျာ………………………လို့ကျွန်တော်ပြောတော့ သူက ဘာမှပြန်မပြောပဲ တိုးတိုးလေးပါပဲ ညည်းလိုက်တာ….
ကောင်လေးက မေးလိုက်တယ်။ မင်း ဘာ့ကြောင့် ကြောတ်နေတာလဲ……….လို့မေးစဉ်မှာပဲ နှလုံးသားလေးက တစ်စုံတစ်ခုကို ထိတ်လန့်သွားဟန်နဲ့ သူ့အနောတ်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နှလုံးအိမ်ထဲ ခုန်ဝင်လိုက်တယ်။
ကျွန်တော် ပြန်လာတော့ လမ်းမှာ တစ်စုံတစ်ယာက်နဲ့ တွေ့တယ်။ ဘာကဘယ်လိုထူးခြားနေမှန်းမသိတဲ့ အရာ။ အချစ်ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ……။ကျွန်တော့ အသွေးအသားတွေ တစ်ဒိန်းဒိန်းနဲ့ ထိန်းရခက်နေတာ။ သေချာပါတယ်။ အချစ်ပဲဖြစ်မယ်..။ သူကျွန်တော့ကို မမြင်ခင် ပြေးထွက်လာတာ။…သူ ကျွန်တော့ကို မြင်သွားရင် ကျွန်တော့မှာ ………………..ကျွန်တော် အသက်ဆက်ရှင်နိုင်မယ်မထင်ဘူး……ဟော ကျွန်တော့ အသွေးအသားတွေ ထိန်းရခက်နေပြန်ပြီ။ သူလာပြီထင်တယ် …..။ ကျွန်တော်ပုန်းတော့မယ်………….လို့အလျှင်အမြန်ပြောရင်း နှလုံးအိမ်တံခါးလေးကိ ဇစ်ပိတ်လိုက်လေရဲ့။
ကဗျာရယ်……….ကောင်လေးရယ်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ကောင်လေးက ကဗျာကို ပြောမလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ကဗျာလေးက ပခုံးတွန့်ပြတယ်………..သူလည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ.
ကဗျာလေးကို မပြင်ဖြစ်တော့ပဲ သိမ်းလိုက်ပါတယ် ကောင်လေးလည်း
အဲဒီနောက်ပိုင်းလည်း သူ ကဗျာတွေ ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကဗျာတွေမှာ အချစ်ကို ကြေတ်ရွံ့မှုတွေ လွှမ်းနေတယ်။ ကောင်လေးလည်း သိပါတယ်။ ပြန်ပြင်ဖို့ ဆိုတာကလည်း ဒီနှလုံးသားလေးရဲ့ ကြောကရွံမှုကို ဖြေဖျောတ်ပေးနိုင်တဲ့သူ မတွေ့လေတော့…………………အဲဒီလိုနဲ့ပဲ့ ………………….
နှလုံးသားလေးလည်း အချစ်ကို ကြောက်ရွံဆဲံ…………………..ဒီချိန်ထိပါပဲ……………
ရှိတတ်ပါတယ်..။လောကကြီးမှာ......။ အချစ်ကိုကြောက်ရွံပြီး ပုန်းရှောင်နေတဲ့နှလုံးသားတွေ............။အများကြီးပါ........။ ကောင်လေးလည်း အပါအ၀င်ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ကောင်လေးရဲ့ ကဗျာတွေကို အပျော်သက်သက်ရေးတယ်လို့ပြောကြရင်တော့ လက်မခံချင်ပါဘူး........။ အချစ်ဆိုတာကို အသေအချာမခံစားဖူးတဲ့အတွက် ရသမြောက်ချင်မှမြောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်လေးပြီးဖို့....သုံးရက်တိတိစဉ်းစားခဲ့တဲ့အချိန်တွေ၊ တစ်ညလုံးမအိပ်ပဲ အိပ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ...........နှလုံးသားတစ်ခုလုံးရင်းခဲ့တာပါ...............ဦးဏှောတ်တစ်ခုလုံးရင်းခဲ့မိတာပါဗျာ......
အဲဒါကြောင့် ကဗျာရေးသူတွေကို အပျော်သက်သက်ရေးတာပါ............လို့ မပြောကြပါနဲ့ လို့ တောင်းပန်ရင်း